Taliyaha Saldhiga degmada Hodan oo ka warbixiyay dilkii guddoomiyihii maamulka Degmadaasi Marxuum Cabdixakiin Dhagajuun. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Taliyaha Saldhiga degmada Hodan oo ka warbixiyay dilkii guddoomiyihii maamulka Degmadaasi Marxuum...
Taliyaha Saldhiga degmada Hodan oo ka warbixiyay dilkii guddoomiyihii maamulka Degmadaasi Marxuum Cabdixakiin Dhagajuun.
Bashiir oo xilligaas ahaa taliyaha qeybta Waliyow Cadde ayaa shaaca ka qaaday in ka hor inta uusan dhicin dilka uu taliyaha saldhigga degmada Howl-wadaag Shuceyb Cabdi Maxamuud lasoo wadaagy xog ku aadan inay gudaha magaalada soo galayaan gawaari sida muqaadaraad, isla-markaana uu hayo xiriirkooda iyo sidoo kale xogtooda, soona socdaan.
Intaasi kadib taliye Bashiir wuuxuu sheegay inuu isna xogta usii gudbiyey taliska qeybta Booliska ee gobolka Banaadir, gaar ahaan Saadaq Joon, isaguna uu ku amray in laga hortego gawaarida la sheegay inay magaalada soo gelinayaan muqaaradaadka.
Sidoo kale wuxuun intaasi ku daray inuu tegay saldhigga Howl-wadaag, uuna ugu yimid taliye Shuceyb oo diyaar garoobay, isla-markaana uu la joogo taliyaha Waaberi, isaga oo xusay inuu kala hadlay sida loo fulinayo howl-galka oo uu mas”uliyadiisu qaatay Shuceyb.
Bashiir oo ka mid ah marqaatiyaasha kiiskan ayaa sidoo kale tilmaamay inuu wacay taliyaha saldhigga Hodan, si uu qeyb uga noqdo howl-galka, balse wuxuu xusay inuu arrintaasi ka horyimid taliyaha salddhigga degmada Howl-wadaag Shuceyb Cabdi Maxamuud oo isugu sheegay inuu kaligiis ku filan yahay howshaasi iyo fulinteeda.
“Aniga waxaan wacay taliyaha saldhiga degmada Hodan si obareeshinkaas uu mid guud u noqdo. Shuceyb wuu soo booday wuxuu yiri taliye aniga ayaa ku filan, wax Problem ahna malahan ee dhammaan yaanan ku wada dhafrin shaqadaas aniga ayaa qabanayo,” ayuu yiri taliyaha Saldhiga Degmada Hodan Bashiir Cabdi Siyaad oo ka hor-hadlay maxkamadda.
Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey “Bacdeen waxaa iigu xigtay rasaasta dhaceysa aniga oo kormeer isaga socda wuxuu gacanka iga soo siiyey in baabuur uu xabadeeyey oo rasaas ay isku fureen bacdeena gaariga uu gadaal u baxay. Waxaan ku iri wax khasaare ah ma jiraan wuxuu dhahay ma faah faahin karo, kadib waa soo baxay meel dhexe intaan soo marayey ayuu igu soo celiyey wuxuuna igu yiri waa guddoomiyihii degmada Hodan,”.
Bashiir Cabdi Siyaad oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in durbo uu tegay goobta ay dhacdadu ka dhacday, isla-markaana uu la kulmay dhimashada guddoomiyaha iyo dhaawac qaar ka mid ilaaladiisa, kadib wuxuu carabka ku dhuftay inuu amray in dhammaan askarta laga qaado hubka, laguna xareeyo saldhigga, isaga oo intaas ku sii daray in kadib la waayey askari ka mid ah ilaalada taliye Shuceyb oo qeyb ka ahaa falkaasi.
“Goobta ayaan imid waxaan la kulmay ka bacdi dhimashada guddoomiyihii iyo dhaawaca dadka anaa ugu soo horreeyey, kadibna tallaabadii iiga gudbooneyd ayaan qaaday.
Saraakiishii ayaan u yeeray nin walba istaafka uu wado qoryaha haka qaado saldhiggana halagu wada xareeyo, sidaas ayaan hubka uga dhignay bacdeena istaafkii mid ka mid ah ayaa la waayey oo Shuceb istaafkiisii ka mid ah ahaa,” ayuu markale yiri taliyuhu.
Si kastaba dhageysiga dacwaddan ayaa kusoo aadeysa, iyadoo horey guddiga loo saaray baaritaanka sida uu u dhacay dilka guddoomiyihii maamulka degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Dhagajuun uu shaaca ka qaaday in bareer ah loo toogtay marxuumka.
Previous articleDowlada Federalka oo ka soo horjeesatay in AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada dowlada
Next articleHalkaan ka dhageysa Gudoomiyahii hore Baarlamaanka oo sharci daro ku tilmaamay Muda kordhinta 2sano
Hay’adda sirdoonka Qaranka Itoobiya ee loo soo gaabiyo NISS ayaa digniin culus u dirtay dadka baraha bulshada ku faafinaya warar ay ku sheegtay kuwo...
Al-shabaab oo Xalay Weerartay bar-koontarool Ciidamada Haramcad ay ku...
Madaxweynaha Hirshabeelle Guudlaawe oo Muqdisho kulan kula qaatay Maamulka shirkada...
Aktarka Ashish Vidyarthi jilaa caan ku noqday doorka laadarnimada ee filimada...
Kulan xasaasi ah oo laguwaday in uu ka dhaco xarunta madaxtooyada...
Fahad Yasiin Ciidankiisa oo weeraray Taliyahii hore ee Nabad Sugida...
Air Force One Sagaal sir oo ku saabsan diyaaradda madaxweynaha...